Huawei dia mikasa ny hampiakatra ny entana ho 200 tapitrisa amin'ny taona ho avy | Androidsis
Efa ho tapitra ny taona ary antenainay ny mpanamboatra sasany hirehareha momba ny fihaonana sy mihoatra ny tanjon'izy ireo amin'ny taona ary ny fanambarana ny tanjona amin'ny taona ho avy. Ny loharanom-baovao sasany dia nitatitra ny tanjon'ny varotra roa amin'ireo marika malaza any Sina, Huawei sy Xiaomi.
Araka ny loharanom-baovao tsy fantatra anarana, Xiaomi sy Huawei dia mifantoka amin'ny fampitomboana ny tanjon'ny varotra hatramin'ny 20% ho an'ny 2019, endrika somary be fanantenana. Xiaomi dia efa nahatratra ny tanjony fandefasana entana 100 tapitrisa nandritra ny taona, saingy nilaza ny loharanom-baovao fa nametraka tanjona 160 tapitrisa ho an'ny 2019, izay maneho ny fiakarana mihoatra ny 20%.
Huawei, etsy ankilany, mifikitra amin'ny hetahetany ary maniry bebe kokoa: Mampitombo ny tanjony amin'ny fandefasana 200 tapitrisa amin'ny taona manaraka. Nilaza ihany koa ny loharanom-baovao fa Oppo sy Vivo, orinasa roa malaza be hafa, dia hahita fiakarana antonony 10% amin'ny taona ho avy. (Jereo: Huawei manakaiky kokoa an'i Samsung eo amin'ny tsena manerantany)
Mikasika ny fizarana tsena, ny tatitra farany an'ny Counterpoint Research dia milaza fa Huawei no mpitarika ny tsena any Shina, miaraka amin'ny 23%, ary arahin'ny akaiky azy ny Oppo sy Vivo, samy manana 21% avy. Xiaomi, amin'ny lafiny iray, dia eo amin'ny laharana fahefatra amin'ny tabilao, miaraka amin'ny anjaran'ny tsena 13%, raha Apple kosa manidy ny 5 ambony amin'ny fizarana 9%. Fa kosa, hitan'i Samsung nidina hatramin'ny 1% ny anjarany tamin'ny tsena. (Jereo: Huawei no laharana faharoa amin'ny marika be mpividy indrindra eran-tany).
Manantena izahay fa ny tsenan'ny smartphone amin'ny taona ho avy dia hanana herin-tsaina sy badass. Orinasa maro no mampitombo ny vokariny ary manome tolotra lehibe kokoaKa raha te-hihazona an'ireto isa ireto i Huawei, Xiaomi ary ireo marika hafa, ary, bebe kokoa aza, hahazo fanekena bebe kokoa amin'ny vahoaka be loatra, mila miasa mafy kokoa izy ireo ary tsy hampidina ny mpiambina azy na oviana na oviana. Miandry ny zava-drehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Huawei dia mikasa ny handefa fitaovana 200 tapitrisa manerantany amin'ny taona ho avy
Avereno jerena ny BLU VIVO XI +